ISundowns icuthele uXulu ongenaqembu
USIYANDA Xulu ongenaqembu okuvela ukuthi ufunwa yiMamelodi Sundowns Isithombe: BACKPAGEPIX
Sithembiso Mkhize | May 17, 2022
KUNGENZEKA ukuthi uSiyanda “Magazi” Xulu abuyele eqenjini lakhe lakudala, iMamelodi Sundowns okuvela ukuthi liyamfuna.
UXulu (30) akanaqembu kusukela ahlukana neqembu ayelidlalela iHapoel Tel Aviv yase-Israel maphakathi nesizini.
Isolezwe lithole ngomthobo walo ukuthi emasontweni edlule amaBrazilians athinte uPaul Mitchell waSiyavuma Group ophethe izindaba zikaXulu.
Kuthiwa ithimba labaqeqeshi beSundowns eliholwa uManqoba Mngqithi limfuna uthuli uXulu ngoba limdingela isipiliyoni sakhe sokudlala phesheya.
Njengamanje lo mdlali oyibamba maphakathi odongeni lwasemuva uziqeqesha naMaZulu FC. Ezinyangeni ezedlule owayeqeqesha Usuthu uBenni McCarthy wathi ukube kuya ngaye ngabe leli qembu alipholisi maseko, liyamsayinisa lo mdlali.
"AmaZulu azosala encela izithupha ngoba abamba ayayeka ngokumsayina. Yena akanankinga ngokusayina kuwo kodwa njengoba iSundowns ikhombisa ukumfuna ngamandla, uzimisele ukuqoqa imithwalo aye eChloorkop. Maduze uPaul Mitchell uzophinde axhumane neSundowns. NoXulu uyikhulumela phansi eyokufunwa iSundowns. Kodwa abasondelene naye bayalwazi lolu daba," kubeka umthombo.
UMitchell uthe uqala ukuyizwa ngaleli phephandaba eyokuthi umdlali wakhe ufunwa iSundowns.
“Ngiqala ngawe ukuyizwa le ndaba (yokufunwa yiSundowns). Ngisayisebenza eyokuthi abuyele phesheya kodwa okwamanje ayikho into ebambekayo,” kusho uMitchell ngamafuphi.
Phambilini uMitchell watshela leli phephandaba ukuthi mancane amathuba okuthi uXulu abuyele kwiPremier Soccer League ngoba umbhekela iqembu phesheya.
UMngqithi usanda kucashunwa ekuveza ukuthi bafuna isitobha esiyibamba maphakathi emuva kanye nomgadli. Emasontweni edlule amaBrazilians edlala neKaizer Chiefs, aze aphoqeleka ukudlalisa uDivine Lunga maphakathi emuva ekubeni engumdlali wasohlangithini lwesinxele.
Uma iSundowns igcina ngokumsayinisa uXulu uzobe ebuyela okwesibili kuyo.
Maphakathi nesizini ephezulu iHapoel Tel Aviv ikhombe uXulu indlela. Leli qembu likhiphe isitatimende liveza ukuthi wenze isenzo esingesihle, ngeke lisakwazi ukumgcina. Leli belimthathe kwiMaritzburg United. UXulu unemidlalo ewu-14 kwiBafana Bafana.
UShupi Nkgadima okhulumela iSundowns, uthunyelelwe imibuzo, ngokufuna kwabo uXuku, nathe uyidlulisele ezikhulwini zeqembu. Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engakabuyi nempendulo, ethi usalindile.